भूपु विद्यार्थीहरुको सक्रियतामा २३ लाख रकम विद्यालयलाई
लमजुङ, १३ फागुन । लमजुङ-राइनास नगरपालिका वडा नम्बर १० को बुद्ध मिलन माध्यमीक विद्यालयलाई बेलायतमा बस्दै आएका भूपु विद्यार्थीहरुको सक्रियतामा संकलीत सहयोग रकम प्रदान गरिएको छ । भूपु विद्यार्थीहरुको सक्रियतामा बेलायतमा बसोबास […]
पृथ्वीसुब्बाको पहिलो निर्णय: उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम घोषणा
पोखरा, ४ फागुन । प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिष्द बैठकमा उज्यालो कार्यक्रम घोषणा गरि दुईवर्षभित्र सबै गाउँमा विजुली पुर्याउने निर्णय गरिएको छ […]
विश्व वन्यजन्तु कोषको नेपाल प्रतिनिधिमा डा. गुरुङ छानिए
२९ माघ,काठमाडौं । विश्व वन्य जन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को नेपाल प्रतिनिधिमा डा. घनश्याम गुरुङ छनोट भएका छन् । यसअघिका प्रतिनिधि अनिल मानन्धरको पदावधि सकिएपछि वासिङटन डिसीस्थित कोषको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले छनोट समिति गठन गरी दरखास्त आह्वान […]
पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति
२८ माघ, पोखरा । एमाले केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेमा पृथ्वीसुब्बासँगै प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङको दाबी थियो । दुबै नेता संस्थापन समूहका हुन् र चुनाव […]
हुम तमु पोखरा, २३ माघ नेपाली लोक सँस्कृति बचाऔं अभियानका साथ क्रियाशील हिमाली साँस्कृतिक परिवारको मंगलवार पोखरा रामबजारस्थित भँवरकोट पार्टी प्यालेसमा २१ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । पोखरा ९, पुरानो वसपार्कमा कार्यलय रहेको हिमाली […]
तुलमान गुरूङ नारायणगढ । चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘मेरी बास्सै’मा ‘मंगली’को भूमिकामा देखिएपछि नायिका रजनी गुरूङको परिचय एकाएक चुलियो । ‘मेरी बास्सैमा’ उनी बुद्धि तामाङ (हनुमाने)को श्रीमतीको रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । स्याङ्जामा जन्मिएकी रजनी सानैबाट […]
रोशनी गुरुङ÷पोखरा २१ माघ सहारा क्लब यु.के., हङकङ र अष्टे«लियाको टोलीले पोखरामा संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी १६औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकपमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रमलाई […]
एटा संवाददाता – अल्डरसट । अत्यन्त सुरिलो स्वरका धनी गायक गायक रामकुमार (आर.के.) गुरुङको एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरिएको छ । उनलाई गत शुक्रबार २६ जनवरी बेलुकी अल्डरसटस्थित निरमाया रोंधी घरमा बिदाइ गरिएको हो । उनी […]
कला क्षेत्रका अब्बल प्रतिभा हुन्, दुर्गा गुरुङ । मुख्यतः संगीतकारको रुपमा परिचित रहे पनि उनमा राम्रो गायकी कला पनि छ । अझ उनको ‘बोल्ड’ परिचय बाँसुरी बादक । तीन खोलाको संगमलाई त्रिवेणी भनेजस्तै दुर्गामा संगीत […]